टिकटकपछि अरू केमा प्रतिबन्ध लगाउलान् ट्रम्पले ?
अमेरिकामा टिकटकको समय पूरा हुन लागेको जस्तो देखिन्छ किनकि राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरू यसमाथि तत्कालै प्रतिबन्ध लगाउने पक्षमा छन् ।
तर चीनको स्वामित्वमा रहेका अन्य याप र सफ्टवेयर सर्भिसलाई पनि तारो बनाइन सक्छ ।
आइतवार अमेरिकाका परराष्ट्रमन्त्री माइक पोम्पेओले केही एसियाली मुलुकका प्रविधि कम्पनीहरूले सीधै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई डेटा बुझाइरहेको बताए ।
त्यसोभए अन्य कुन याप जोखिममा छन् त ?
सबभन्दा पहिलो तारो त टेनसेन्ट कम्पनीको वीच्याट हो । पोम्पेओले टिकटकसँग वीच्याटको पनि नाम लिए ।
वीच्याटलाई सामाजिक सञ्जाल भन्ने गरिन्छ तर यो त्यसभन्दा बढी हो । यसबाट पैसा भुक्तानी गर्न मिल्छ, थप ससाना प्रोग्राम चलाउन मिल्छ, मिति खोज्न मिल्छ, समाचार हेर्न मिल्छ अनि मेसेज पठाउन तथा अन्य सामाजिक क्रियाकलाप गर्न मिल्छ ।
चीनको आन्तरिक निगरानी साधनको महत्त्वपूर्ण प्रविधिका रूपमा पनि यसलाई हेर्ने गरिएको छ । हल्ला फैलाउने आरोप लागेका स्थानीय प्रयोगकर्ताहरूलाई वीच्याटमा फेसियल स्क्यान र भोइस प्रिन्ट गर्न लगाउँछ ।
यसका साथै चीनबाहिर बस्ने चिनियाँहरूलाई प्रोपागान्डा फैलाउनका लागि वीच्याटको उपयोग चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले गर्ने गरेको आरोप पनि छ ।
क्यानडाको सिटिजन ल्याबका सुरक्षा अनुसन्धाताहरूले हालै गरेको अध्ययनमा चीनबाहिर बस्ने प्रयोगकर्ताहरूको वीच्याटमा राजनीतिक रूपमा संवेदनशील सामग्रीहरूमाथि चिनियाँ अधिकारीहरूले निगरानी गर्ने गरेका छन् । कुनै सामग्री ब्लक गरेको विषयमा उनीहरूले केही भेटेनन् तर संकलन गरिएको डेटालाई चीनभित्र सेन्सरशिपलाई थप बलियो बनाउन उपयोग गरियो ।
टेनसेन्टले चाहिँ वीच्याटका अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगकर्ताहरूमाझ शेयर गरिने सामग्री निजी रहने बताएको छ ।
पोम्पेओले फेसियल रिकोग्निसन प्याटर्न संकलन गर्ने सफ्टवेयर पनि चिन्ताको विषय भएको बताए ।
उनले कुनै उत्पादनको नाम लिएनन् तर धेरै चिनियाँ कम्पनीहरूले यस्ता उत्पादन निकाल्ने गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल क्वाइ र ब्यूटी याप यूक्याम दुवैले फेसियल रिग्निसन आल्गोरिदम उपयोग गर्ने गरेका छन् ।
विगत एक वर्षमा ट्रम्प प्रशासनले दर्जनौं चिनियाँ कम्पनीहरूलाई आर्थिक कालोसूचीमा राखेको छ । ती कम्पनीहरूले सरकारको स्वीकृति विना अमेरिकी प्रविधि किन्न पाउँदैनन् ।
चीनले अमेरिकाको यस कदमको कडा आलोचना गरेको छ ।
‘हामी अमेरिकालाई गल्ती सच्याउन आग्रह गर्छौं,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले त्यतिखेर भनेका थिए ।
भिडियो च्याट सर्भिस जूमले पनि चिन्ता दिएको देखिन्छ ।
चीनमा जन्मेका व्यवसायी एरिक युआनले जूम बनाएका हुन् । यसले कतिपय कलहरू चीनमा भएका कम्प्युटर सर्भर हुँदै लगेको अनि चिनियाँ सरकारको विरोध गर्ने कार्यक्रम चलाएका कतिपय अकाउन्ट बन्द गरिदिएको आरोप छ ।
कम्पनीले आफ्नो सेवा चीनमा रहेका प्रयोगकर्ताहरूलाई सीधै नदिएर स्थानीय साझेदार मार्फत दिने घोषणा गरेको छ ।
यसबाट उसले आफू चीन सरकारप्रति बफादार नरहेको देखाउन खोजेको छ ।